Timothy Simons – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Yes, God, Yes (2019) Unicode ဒီဇာတျကားလေးကတော့ American Comedy-Drama တဈကားဖွဈပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြး အသကျ၁၆နှဈအရှယျကောငျမလေး အဲလဈက အရမျးဖွူစငျတဲ့ Catholicဘာသာဝငျကောငျမလေးဖွဈပါတယျ ‌တဈနမှေ့ာ သူဟာ အှနျလိုငျးခကျြတငျလုပျနတေုနျး ကိုယျ့ဘာသာအာသာဖွေ‌နမေိပွီး အပွဈရှိသလိုခံစားခဲ့ရပါတယျ သူမရဲ့အတနျးဖျောဖွဈတဲ့ဝိတျဒျနဲ့လညျး မကောငျးသတငျးတဈခုထှကျထားပွနျပါသေးတယျ လူငယျဘာသာရေးပှဲတဈခုမှာလညျး အလှဲတှလေုပျမိပွနျပါတယျ သူအဲ့ဒီအပွဈတှအေကုနျ ဝနျခံနိုငျမလား… အဲ့တရားပှဲကလူတိုငျးကကော သူထငျထားသလို စငျကွယျသူတှဖွေဈနိုငျပါ့မလား… Translated and Review By MinnMyoKhant. IMDb Rating - 5.9/10 Zawgyi ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ American Comedy-Drama တစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း အသက်၁၆နှစ်အရွယ်ကောင်မလေး အဲလစ်က အရမ်းဖြူစင်တဲ့ Catholicဘာသာဝင်ကောင်မလေးဖြစ်ပါတယ် ‌တစ်နေ့မှာ သူဟာ အွန်လိုင်းချက်တင်လုပ်နေတုန်း ကိုယ့်ဘာသာအာသာဖြေ‌နေမိပြီး အပြစ်ရှိသလိုခံစားခဲ့ရပါတယ် သူမရဲ့အတန်းဖော်ဖြစ်တဲ့ဝိတ်ဒ်နဲ့လည်း မကောင်းသတင်းတစ်ခုထွက်ထားပြန်ပါသေးတယ် လူငယ်ဘာသာရေးပွဲတစ်ခုမှာလည်း အလွဲတွေလုပ်မိပြန်ပါတယ် သူအဲ့ဒီအပြစ်တွေအကုန် ဝန်ခံနိုင်မလား… အဲ့တရားပွဲကလူတိုင်းကကော သူထင်ထားသလို စင်ကြယ်သူတွေဖြစ်နိုင်ပါ့မလား… Translated and Review By MinnMyoKhant. IMDb Rating - 5.9/10
IMDB: 5.9/10 1714 votes